Loko mitantara | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 19/10/2021 21:21 | Nohavaozina amin'ny 19/10/2021 21:24 | Palety miloko
Ny iray amin'ireo fahalalana lehibe tokony ho fantatry ny mpanao drafitra, mpamorona na mpamorona momba ny loko ny antsoina hoe loko analog. Ireo dia ampahany tena lehibe amin'ny fiaraha-miasa amin'izy ireo satria tsy maintsy manavaka azy ireo amin'ny hafa ianao.
Fa inona ny loko mifanohitra? Inona avy ireo karazana? Jereo, eto ambany, izay rehetra ilainao ho fantatra momba azy ireo amin'ity torolàlana nomaninay ho anao ity.
1 Inona avy ireo loko mifanohitra
2 Karazan-loko analog
2.1 Loko Kilonga
2.2 Loko faharoa
3 Fampiasana loko mifanohitra
Inona avy ireo loko mifanohitra
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny lazainay amin'ny loko mitovy amin'izany. Saingy, raha hanao izany dia tsy maintsy mahatakatra ny atao hoe kodiarana loko ianao. Izy io dia nofaritana ho toy ny sary an-tsary izay baikon'ny loko mifototra amin'ny tonony na ny volony. Raha atao teny hafa, dia faribolana iray izay anehoana ny loko sy ny lokony ho iray manontolo, manangona ny mena rehetra, ny mavo, ny maitso, ny manga ... ao.
Amin'izany no ahafahantsika mahatakatra ny ny loko mifanohitra amin'izany toa ireo izay mahay mandanjalanja ary mifanakaiky tokoa. Mariho fa ny "analogie" dia midika hoe mitovy na misy ifandraisany. Noho izany, ireo no iray izay akaiky ao anatin'ny kodiarana miloko.
Io dia ahafahanao misafidy loko izay hifangaro, satria tena mizara alokaloka izy ireo. Ary inona no azonao amin'izany? Eny, misy haingon-trano monochromatic, izay misy ny tonony lehibe ary mifangaro amin'ny hafa mitovy amin'io loko voalohany io.
Ny iray amin'ireo fanalahidy izay vitsy no mahalala momba ny loko mifanohitra amin'izany dia ny loko nalaina, ny voalohany, antsoina hoe lehibe ary ny loko akaiky azy indrindra dia halamina ankavanana sy ankavia. Izany hoe tsy afaka mandray loko iray sy roa manaraka ianao, fa tokony ho iray eo aloha ary iray ao aoriana.
Ny loko analog dia azo sokajiana ho sokajy roa midadasika: ambaratonga voalohany sy faharoa. Saingy, ao anatin'ity farany ity, tsy ny rehetra no hiditra, fa ny sasany ihany.
Ny loko voalohany dia nantsoina tokoa satria alokaloka izay tsy azo amin'ny fampifangaroana loko roa na maromaro. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izy ireo no madio indrindra na tany am-boalohany izay tsy nalaina avy tamin'ny fangaro.
Ary inona ireo? Eny, izy ireo dia mety ho mena, maitso ary manga amin'ny RGB, manga, mavo ary magenta amin'ny CMYK na amin'ny maodely nentim-paharazana, mena, mavo ary manga.
Inona no atao hoe loko mifanohitra amin'izany? Amin'ity tranga ity, ireo izay fantatra fa toy izany dia: Manga mena mavo.
Ho azy ireo, loko faharoa dia ireo izay azo avy amin'ny fifangaroan'ny loko voalohany. Ny fampifangaroana loko 2-3 voalohany ihany no ahazoana alokaloka samihafa fa rehefa mifangaro ihany ny loko dia heverina ho faharoa izy ireo (raha tsy izany tsy izany no izy).
Amin'ity tranga ity, ny voasary, maitso ary volomparasy dia heverina ho loko faharoa.
Fampiasana loko mifanohitra
Ny loko analog, araka ny efa noresahintsika teo aloha, dia ireo izay mampiasa feo iraisana amin'izy rehetra, amin'ny fomba izay rehefa manaingo, na mampiasa azy ireo amin'ny endrika, avelany hisy fitambaran'ny monochromatic. Ohatra, alao sary an-tsaina hoe te handravaka zavatra miloko mena ianao amin'ny alàlan'ny fampianarany. Ny valiny dia ho ao anatin'ireo feony ireo ny zava-drehetra, fa ny lehibe indrindra no mizaka azy ary ny hafa kosa manome azy ny fikitihana ny fahasamihafana ilain'izy ireo.
Amin'ny ankapobeny ny tsirairay amin'ireo loko mitovy amin'izany dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana maro. Ohatra, ny feo mangatsiaka kokoa dia mety tsara amin'ny toerana tianao hialana sasatra, milamina sy mangina.
Ho an'ny tontolo mavitrika kokoa sy ilaina ny angovo mila mampiasa loko analog mahery kokoa ianao.
Amin'ny fomba azo ampiharina:
Loko toy ny manga, mavo ... Manala sasatra sy milamina izy ireo.
Loko toy ny mena, mavo ... Mety tsara amin'ny fijanonana mavitrika kokoa izy ireo.
Mazava ho azy, raha ilaina ny mifanohitra ambony kokoa dia ilaina ny mandeha amin'ny loko mifameno, izay manome lalao bebe kokoa sy vokatra tsara kokoa noho ireo.
Raha vantany vao fantatrao hoe inona ireo loko mifanohitra amin'izany, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny manome anao ohatra ny amin'ny inona ireo loko. Raha ny marina, misy tsiroaroa telo izay ny mifanohitra loko, tahaka azy ireo:
Mena sy maitso.
Mavo sy volomparasy.
Manga sy manga.
Etsy ankilany, manana ireto manaraka ireto ianao:
Mavo mavo mavo sy mavo mavo.
Volomboasary misy voasary mavo sy mena-mena.
Mena miaraka amin'ny mena-mena ary volomparasy mena.
Violet miaraka amin'ny volomparasy mena sy manga manga.
Manga misy manga sy mangatsiaka purplish.
Maitso misy maintso sy maintso-mavo.
Ny fananganana ireo dia mifototra amin'ny boribory chromatic amin'ny fomba toy izany, raha misafidy loko iray ianao dia tsy maintsy manambatra azy amin'ilay teo aloha sy ilay iray avy hatrany taorian'izay.
Araka ny hitanao, ny loko mitovy amin'izany dia azo ampiasaina amin'ny zavatra maro, manomboka amin'ny efi-trano, trano, birao sns. na ho an'ny famolavolana tranonkala aza, famolavolana logo, sary, fanoharana, sns.
Fantatrao bebe kokoa momba ireo alokaloka ireo? Mizara izany aminay ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Palety miloko » Loko mitantara
Ahoana ny fomba fanaovana collage amin'ny Photoshop
Ahoana ny fomba hanaovana Reel amin'ny Instagram